Interview မှာ ရိုးသားစွာဖြေလိုက်တဲ့စကားကြောင့် ပရိသတ်တွေကို ပွဲကျသွားစေခဲ့ပြန်တဲ့ Xiao Zhan | News Bar Myanmar
Interview မှာ ရိုးသားစွာဖြေလိုက်တဲ့စကားကြောင့် ပရိသတ်တွေကို ပွဲကျသွားစေခဲ့ပြန်တဲ့ Xiao Zhan
January လ ၁၉ရက်နေ့တုန်းက တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ “Douyin Star Motion Night” ဆုပေးပွဲမှာတော့ Xiao Zhan ဟာ “Popular Star of the Year” ဆုကို ရရှိခဲ့တာပါ။ Douyin မှာတော့ Update ကောင်းကောင်းလေးတွေတင်ပေးလေ့ရှိပြီး တစ်ခါတလေမှာတော့ တော်တော်ရီစရာကောင်းတဲ့ Filter တွေကိုသုံးပြီး Update ပေးလေ့ရှိတာကြောင့် Zhan Ge ရဲ့ Viedo လေးတွေကတော့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ ကြည့်လို့မဝနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။
ဆုပေးပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Interview အသေးစားလေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရှောင်းကျန့်ရဲ့အဖြေကြောင့် အားလုံးကသဘောတွေကျပြီး ပြောမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ Interview မှာတော့..
Q: Douyin Viedo ထဲမှာ ကြည့်လေ့ရှိတဲ့ အကြောင်းအရာ?
XZ: ကျွန်တော်က Douyin ထဲမှာ များသောအားဖြင့် ကြောင်လေးတွေ၊ ခွေးလေးတွေကို ကြည့်လေ့ရှိတယ်။ အဲ့တာကြောင့် အကောင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Viedo တွေက သုံးတဲ့အခါတိုင်းတက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာလည်း တအားမိုက်တဲ့ Viedo တစ်ခုရှိတယ်လေ။ ရီရတဲ့မျက်နှာပုံစံနဲ့ဟာကိုပြောတာပါ။ အဲ့တာလုပ်ရတာ တော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းပါတယ်။
Q: နောက်ထပ် အဲ့လိုအပြောင်မျက်နှာနဲ့ Selfie တွေ ရိုက်ဦးမှာလား?
XZ: (သက်ပြင်းချလျက်) ကျွန်တော့်ကိုအကုန်လုံးက ဝိုင်းစကြတယ်လေ..နောက်ထပ် ထပ်ရိုက်ဖို့တောင်ယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူး..အဲ့တော့ စောင့်သာကြည့်ကြပါတော့..
Q: မင်းရဲ့ Selfie နဲ့ပတ်သက်ရင် ဘာပြောချင်လဲ?
XZ: ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းလှလှလေးဖြစ်အောင် ရိုက်ထားတယ်လေ(ရယ်လျက်)
Q: ဆောင်းတွင်းမှာ အေးတော့ ဘယ်လိုတွေဝတ်လဲ? အသားကပ်ဘောင်းဘီဝတ်လား?
XZ: ကုတ်အထူအရှည်ကြီးတွေကို အပြင်ကနေထပ်ဝတ်ပါတယ်။ ဒါပေါ့..ဒါပေါ့..အသားကပ်ဘောင်းဘီဝတ်တာပေါ့..ဝန်ခံပါတယ်.. ကျွန်တော်က အသက်ကြီးပြီလေ။
ဖော်ပြပေးခဲ့တာကတော့ Xiao Zhan ရဲ့ Interview အဖြေလေးတွေဖြစ်ပြီး သူ့ကိုယ်သူ အသက်ကြီးနေပါပြီလို့ပြောလိုက်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ ပြောမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အသက် ၂၉ ပြည့်ပြီးသားဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသက်ကြီးလှပြီထင်နေတဲ့ Zhan Ge ဟာ ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ ဂရုစိုက်ပေးမှုတွေပေးချင်တဲ့၊ နွေးထွေးတဲ့မေတ္တာတွေပေးချင်တဲ့ အချစ်ခံကလေးလေးတစ်​ယောက်လိုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။
Next ပရိတ်သတ်တွေမျှော်လင့်တကြီးစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့ Lee Jong Suk နဲ့ Zheng Shuang တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်အကျပ်အတည်းကာလ »
Previous « ဟင်းချက်ရတာကိုဝါသနာပါတဲ့ Jin ဟာ ဘယ်အကြောင်းကြောင့် ဝါသနာကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ရသလဲ